Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada ICC ayaa dacwad ooge cusub u dooratay Karim Khan… – Hagaag.com
25 Febraayo 2021 in English // Hundreds of buildings burned around Tigray town, research group says…
25 Febraayo 2021 in English // German man charged with giving Bundestag floor plans to Russian intelligence…
25 Febraayo 2021 in English // AP PHOTOS: Migrants evade Libyan coast guard to reach Europe…
Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada ICC ayaa dacwad ooge cusub u dooratay Karim Khan…
Posted on 13 Febraayo 2021 by Admin in World // 0 Comments
Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada waxay Jimcihii u doorteen Karim Khan oo reer Britain ah dacwad oogaha cusub ee muddo sagaal sano ah.
Khan ayaa ka guuleystay codbixin qarsoodi ah seddex musharax oo kale si loogu badalo dacwad oogaha Fatou Bensouda.
Maxkamadda fadhigeedu yahay magaalada Hague oo ka kooban 123 xubnood, oo shaqada bilawday ku dhowaad 20 sano ka hor, waxay gacanta ku haysaa dambiyada dagaal, dambiyada ka dhanka ah aadanaha, xasuuqa iyo dambiyada gardarada ah.
Garyaqaanka reer Ingiriis Karim ayaa caan ku ah inuu madax u noqdo kooxda baaritaanka gaarka ah ee Qaramada Midoobay ee baareysa dambiyada dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq.
.Waxaa jiray loolan siyaasadeed oo xoog leh oo loogu jiray shaqada ugu sareysa ICC xili si aad ah loo baaray xafiiska xeer ilaaliyaha.
Maamulkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa cunaqabateyn saaray sanadkii hore shaqaalihii maxkamada oo ay ku jirto Bensouda taas oo salka ku heysay baaritaano xafiiskeeda uu ku sameeyay dambiyo dagaal oo laga yaabo inay ka dhaceen Afghanistan, oo ay ku jiraan ciidamada Mareykanka. Mareykanku xubin kama aha maxkamadda.
Maamulka cusub ee Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa “si buuxda dib u eegis ugu sameyn doonaa” cunaqabateynta saaran saraakiisha ICC, afhayeen u hadlay Waaxda Arrimaha Dibadda ayaa sheegay bishii la soo dhaafay.
Kadib usbuucii la soo dhaafay maxkamaddu waxay sheegtay inay awood u leedahay dembiyada dagaal ee ka dhacay dhulalka Falastiin, taasoo u horseedi karta baaritaan ay si adag uga soo horjeedaan xubnaha aan ka tirsaneyn ICC-da ee Israel iyo Mareykanka.
Mid ka mid ah go’aannada ugu horreeya ee Khan wuxuu noqon karaa haddii la sii wado baaritaan buuxa oo ku saabsan dhulalka Falastiiniyiinta, halkaas oo Bensouda ay sheegtay inay jirto sabab macquul ah oo lagu soo gabagabeeyo dambiyada dagaal ee laga yaabo inay galeen labada ciidan ee Israel iyo kooxaha hubeysan ee Falastiin.
About Admin (13242 Articles)
Hundreds of buildings burned around Tigray town, research group says…
German man charged with giving Bundestag floor plans to Russian intelligence…
AP PHOTOS: Migrants evade Libyan coast guard to reach Europe…